Lens, iyo app yeApple Watch iyo inokutendera iwe kunakirwa Instagram | Ndinobva mac
Uye ndeyekuti hapana wega Instagram application yeApple Watch uye ndosaka izvozvi ne nyowani Lens Ye IG appVashandisi vanoda kuona kwavo Kudya, makomendi, Nhau, chiitiko uye zvimwe zvinhu zveino anozivikanwa masocial network paApple Watch yavo vachakwanisa kuzviita pasina dambudziko.
Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti iyi app inogona kushandisa nharembozha yeApple Watch yedu kuti ishande, saka hatizofanira kuve neiyo iPhone padyo kuti ikwanise kuona mifananidzo, kutaura, kuona chiitiko, nezvimwe. An app yave ichiwanikwa kwemazuva mashoma uye inogona kutorwa mahara kubva kuchitoro cheapp yeApple Watch.
Iyo yakasarudzika yemahara app
Chinhu chakakosha chekufunga nezvacho usati watanga kurodha pasi ndechekuti iyo application pachayo yakasununguka kurodha asi isu tinoda iyo Pro vhezheni (izvo zviri pachena kuti zvakabhadharwa) kugona kushandisa mazhinji emabasa ayo anotipa. Chero zvazvingaitika, avo vashandisi vasina mvumo yeapp uye vane chokwadi cheWatch Watch iyo inogona kuvafarira pamutengo we1,99 euros.
Chaizvoizvo iyo yemahara vhezheni yeapp inotipa "mashoma sarudzo dzekushandisa" sekuziva kwedu yepamutemo Instagram app. Neshanduro yemahara iyi tinokwanisa kuwana kwedu Kwekudya uye toona chiitiko chedu ... Dzimwe sarudzo dzapihwa dzakadai sekuona nyaya, kuongorora, kuona mameseji kana chimiro chedu uye kutsvaga pasocial network zvinogumira pakubhadharira Pro vhezheni. Saka Kana iwe uri mumwe weavo vanonyatsoshandisa iyi pasocial network uye iwe uine Apple Watch pachiuno chako, unogona kufarira kutenga Lens YeGI.
Kuti utore iyo, unogona kuiwana yakananga kubva kuchitoro chekushandisa muWatch app pane yako iPhone, ipapo kutenga iyo Pro vhezheni isu tinofanirwa kuenda takanangana neapp muApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Lens, iyo app yeApple Watch iyo inokutendera iwe kunakirwa Instagram
Jose Miguel Sabina Gonzalez placeholder mufananidzo akadaro
Pindura kuna Jose Miguel Sabina Gonzalez
Yemahara kutsiva chirongwa cheApple Chirungu adapta